Elona xesha lilungileyo lokutyelela iJapan
Ikhadi le-SIM vs Pocket Wifi
Ixesha laseJapan ngoku
Umlawuli kunye neFlegi
Inyikima kunye neeVolcanos
Iindawo ezinxulumene neJapan
Amaxesha onyaka aseJapan
Indalo isifundisa "Mujo"
Nxiba Ubusika eJapan
Nxiba Ubusika eHokkaido
Ihlobo lasehlotyeni eJapan
Ukubuk 'iindwendwe eJapan
Isimilo kunye namasiko
Iqela laseJapan Dlala
Imifanekiso: Umtshato waseJapan
Imifanekiso: Inkcubeko ye bamboo
Imifanekiso: Uyilo olukhanyayo eJapan
Iifoto: Iimoto ze-Kei
Amatikiti kunye noTyelelo
Ukutya & Ukusela
Izilwanyana kunye neentlanzi
Iitempile kunye nemilambo
Imanga kunye ne-Anime
Isithili se Shimane
Imifanekiso: I-Inland Sea
Ihotele kunye neRyokan
I-Shinkansen (iloliwe ye-Bullet)
Isikhululo senqwelomoya esitsha saseChitose
Isikhululo senqwelomoya saseNarita
Isikhululo senqwelomoya saseHaneda
Isikhululo senqwelomoya saseKansai
Amaxesha amangalisayo, uBomi kunye neNkcubeko
Cofa kwisixeko, kwisixeko, okanye kwingingqi ukujonga inqaku. Ukuba awukwazi ukucofa kwimephu, nceda ucofe iqhosha elingezantsi kwaye ukhethe isixeko, i-dolophu okanye ingingqi ofuna ukuyibona.
Imimandla kunye namadlelo
Aomori Akita Ukuqhawula
Fukuoka yomlando Nagasaki
Imifanekiso: Itempile yaseKiyomizudera eKyoto
Eyona nto inomtsalane kubakhenkethi eKyoto yiFushimi Inari Shrine Shrine, iTempile yaseKinkakuji kunye neTempile yaseKiyomizudera. ITempile yaseKiyomizudera ibekwe kumathambeka entaba kwimpuma yesixeko saseKyoto, kwaye umbono ovela kwiholo enkulu, emi kwiimitha ezili-18 ukuphakama, uyamangalisa. Masihambe kuhambo lwenyani ukuya kwiTempile yaseKiyomizudera! Iifoto zeTempile yaseKiyomizudera eKyoto Itempile yaseKiyomizudera eKyoto = Itempile yaseShutterstock Kiyomizudera eKyoto = Itempile yaseShutterstock Kiyomizudera eKyoto = Itempile yaseShutterstock Kiyomizudera eKyoto = IShutterstock Itempile yaseKiyomizudera eKyoto = Itempile yaseShutterstock Kiyomizudera eKyoto = Itempile yaseShutterstock yaseKyoto = Itempile yaseShutterstock e Kyoto = Shutterstock Kiyomizudera Temple e Kyoto = Shutterstock Imephu ye Kiyomizudera Temple [idilesi yemephu = "Kiyomizudera Temple" width = "100%" height = "353px" api = "AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme = "screet-"screet" class="d" Imephu yomda dp-imephu-ephakathi" zoom = "12" draggable="true" controls="true"] Ndiyabulela ngokufunda kude kube sekupheleni. Buyela kwi "Best of Kyoto"Izithuba ezihambelanayo: Iifoto: Itempile yaseKodaiji eKyoto Iifoto: Itempile yaseNanzenji eKyoto Iifoto: Ubugqi beTempile yaseRurikoin eKyoto Iifoto: Imibala ekwindla eTempukuji Temple, kwiifoto zeKyoto: Itempile yaseDaitokuji eKyoto -Ihlabathi leZen eHarmony kunye neNdalo Kyoto ! 26 Iindawo ezinika umdla zotyelelo: Fushimi Inari, Kiyomizudera, Kinkakuji njl. Iifoto: Eikando Zenrin-ji Temple -Ithempeli enemibala emihle yasekwindla Iifoto: Umlambo waseKamogawa kwiifoto zaseKyoto: Amagqabi ekwindla eKyoto
iifoto Ukutsalwa likhephu
Imifanekiso: Iilali ezigqunywe likhephu eJapan
Ndingathanda ukwabelana nawe ngembonakalo yeelali ezinekhephu zaseJapan. Le yimifanekiso yeShirakawa-go, Gokayama, Miyama kunye ne-Ouchi-juku. Ngenye imini, uya konwabela ihlabathi elinyulu kwezi lali! Iifoto zelali ezigqunywe likhephu eShirakawago = "ingqiqo" iklasi="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="100" draggable="true" controls="yinyaniso"] Gokayama (Toyama Prefecture) Gokayama, Toyama Prefecture Gokayama, Toyama Prefecture Map yeGokayama [idilesi yemephu = "Gokayama" ububanzi = "500%" height="87px" api="AIzaSyDvB8bpqAqs_d8wlvYARF3obRvaO4PEN8" theme="discreet" class="dp-light-border-map dp-map-centered" " draggable="true" controls="inyani"] Miyama (Kyoto Prefecture) Miyama, Kyoto Prefecture Miyama, Kyoto Prefecture Imephu yase Miyama [idilesi yemephu="Miyama, Kyoto" wide="100%" height="500px" api= "AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" umxholo = "ingqiqo" iklasi = "dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="8" draggable="true" controls="true"] Ouchi-juku (Fu kushima Prefecture) Ouchi-juku, Fukushima Prefecture Ouchi-juku, Fukushima Prefecture Imephu ye Ouchi-juku [idilesi yemephu = "Ouchijuku, Fukushima" wide="100%" height="500px" api="AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlv8RVAETTE3oRF4oRF8oRF100o class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="500" draggable="true" controls="true"] Into omawuyinxibe xa undwendwela iilali ezinekhephu Ndiyabulela ukufunda kude kube sekupheleni. Buyela kwi "Snow Destinations" Izithuba eziyeleleneyo: Iifoto: Intaba iFuji egqunywe ngekhephu 87 Iindawo eziGqwesileyo zekhephu eJapan: Shirakawago, Jigokudani, Niseko, Sapporo snow festival ... Iifoto: K-cars in Japan Photos: Sakura- Cherry blossoms in Iifoto zaseJapan: IMiharu Takizakura-Owona mthi wecherry ubalaseleyo eJapan! Iifoto: ISan'in -Ngumhlaba ongaqondakaliyo apho iJapan yakudala ihlala khona! Iifoto: INara -Ikomkhulu lamandulo laseJapan Wamkelekile eJapan! Yonwabela iifoto ezintle ezingama-8! Iifoto: Amaxesha amane eKamikochi Amafoto: Odaiba eTokyo Bay Amafoto: Hakodate Amafoto: Ise Jingu Shrine ...
Iifoto: IBiei neFurano ehlotyeni
Ezona ndawo zidumileyo zabakhenkethi eHokkaido ehlotyeni yiBiei neFurano. Le mimandla, imi kumbindi weHokkaido, inamathafa arhabaxa. Iintyatyambo ezimibalabala ziyadubula apho. Ukubona utshintsho lwendalo kweli thafa kuya kuyiphilisa ingqondo yakho. Ngokuphathelele uBiei noFurano, sele ndibhale amanqaku athile. Nangona kunjalo, ndingathanda ukwazisa ubuhle bedlelo lasehlotyeni ngakumbi, ke ndiza kushwankathela inqaku lefoto apha. Nceda ubhekisele kumanqaku alandelayo malunga noBiei noFurano. Umhlaba omhle ehlotyeni Ukuphuma kwelanga eBiei, eHokkaido, eJapan = Adobestock Iintyatyambo ezintle zefama zefama ezimibalabala induli eBiei, Hokkaido, japan = Shutterstock African Marigold, Salvia splendens ityatyambe kwimigca yomnyama kwiGadi yeeNtyatyambo ezidumileyo nezintle zePanoramic Shikisai-no-oka eHokkaido , Japan = Shutterstock Lavendar, scarlet sage blossom of Sunrise Park, Furano, Hokkaido, Japan = Shutterstock Umfazi omi kwiLavender Field eTomita Farm, Furano, Hokkaido, Japan = Shutterstock Ezinye iimbono ezintle e Biei naseFurano Induli entle yaseBiei- cho, Hokkaido = Adobe Stock Ken & Mary umthi, indawo edumileyo Biei-cho, Hokkaido Japan = Shutterstock Sunflower blossom in Hokusei no Oka Tenbo Park e Hokkaido, Japan = Shutterstock blue echibini bieishirogane idolophu = Shutterstock blue echibini bieishirogane idolophu = AdobeStock Evening in Hokkaido Evening landscape. Biei Hokkaido, Japan = Shutterstock sunset e Biei, Hokkaido, Japan = Shutterstock Pretty sunset e Biei, Hokkaido, Japan = Shutterstock Maps Biei [idilesi yemephu = "Biei, Hokkaido" width="100%" height="300px" api=" AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme = "discreet" class = "dp-light-border-map dp-map-centered" zoom = "8" draggable = "true" controls = "yinyaniso"] Furano [idilesi yemephu = "Fudorano", Horano. ..
Iifoto: IGeisha (Maiko & Geigi) eGion, eKyoto
IJapan isenayo inkcubeko ye "geisha". AmaGeisha ngabafazi abasonwabisa iindwendwe zabo ngentliziyo epheleleyo ngemidaniso neengoma zaseJapan. I-Geisha yahluke ngokupheleleyo kwi-courtesan "Oiran" eyayikho ngexesha le-Edo. E-Kyoto, i-geisha ibizwa ngokuba yi "geigi". I-geisha encinci yomfundi ibizwa ngokuba yi "maiko". Kutshanje, abasetyhini abasebenzele inkampani banokuba yigeisha. Ngaphambili, ndiye ndadlan' indlebe negeisha izihlandlo ezininzi. Bafunde iindlela zokuziphatha ezinengqondo nezithambileyo kwaye bangabalandeli abaxabisekileyo benkcubeko yemveli. E-Kyoto, imisitho ibanjwa entwasahlobo nasekwindla apho unokubukela umdaniso we-geisha. I-Geisha nayo idlala indima esebenzayo kwi-Gion Festival ngoJulayi. Nceda zama inkcubeko geisha! Iifoto zeGion Iifoto zeGion = Iifoto zeShutterstock zeGion = Iifoto zeShutterstock zeGion = Iifoto zeShutterstock zeGion = Iifoto zeShutterstock zeGion = Iifoto zeShutterstock zeGion = Iifoto zeShutterstock zeGion = Iifoto zeShutterstock zeGion = Iifoto zeShutterstock zeGion = Imephu yeShutterstock ye Gion [idilesi yemephu = "Gion, Kyoto" ububanzi = "100%" height="300px" api="AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme="" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="12 " draggable="true" controls="true"] Ndiyabulela ngokufunda kude kube sekupheleni. Buyela kwi "Best of Kyoto" Izithuba eziyeleleneyo: Iifoto: iKyoto Imperial Palace (Kyoto Gosho) Iifoto: iKyoto yesiNtu eHlobo Iifoto: Itempile yaseKodaiji eKyoto Iifoto: Iintyatyambo zeCherry eKyoto Iifoto: Itempile yaseKiyomizudera eKyoto Iifoto: Umlambo waseKamogawa eKyoto Iifoto: Itempile yaseNanzenji eKyoto Iifoto : Umnyhadala weJidai Matsuri eKyoto Iifoto: Ukukhanya okumangalisayo “Hanatouro” eArashiyama, Kyoto Iifoto: ...
Imifanekiso: Kinkakuji vs Ginkakuji -Which ngowuphi owuthandayo?
Yiyiphi oyithanda ngcono, iKinkakuji okanye iGinkakuji? Kweli phepha, mandazise iifoto ezintle zezi tempile zimbini ezimele iKyoto. Ukufumana ulwazi oluninzi malunga neKinkakuji kunye neGinkakuji, nceda ubone amanqaku angezantsi. Iifoto zeKinkakuji kunye neGinkakuji Temple eKyoto, eJapan = Itempile yaseShutterstock Kinkakuji eKyoto, eJapan = Itempile yaseShutterstock Ginkakuji eKyoto, eJapan = Itempile yaseShutterstock Ginkakuji eKyoto, eJapan = Itempile yaseShutterstock Kinkakuji eKyoto, eJapan = Itempile yaseShutterstock Ginkakuji eKyoto, Japan = Itempile yaseShutterstock Kinkakuji eKyoto, eJapan = Itempile yaseShutterstock Ginkakuji eKyoto, eJapan = Itempile yeAdobeStock Kinkakuji eKyoto, eJapan = Imephu yeShutterstock yeKinkakuji [idilesi yemephu = "Kinkakuji" wide="100%" height="300px" api= "AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme="" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="12" draggable="true" controls="true"] Imephu yeGinkakuji [idilesi yemephu" ububanzi "Ginkakuji" = "100%" ubude = "300px" api="AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme="" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="12" draggable="true" controls="inyani" ] Ndiyabulela ngokufunda kude kube sekupheleni. Buyela kwi "Best of Kyoto"Izithuba ezihambelanayo: Iifoto: Itempile yaseKodaiji eKyoto Iifoto: Iindlela zembali ezisezindulini eKyoto -Sannei-zaka, Ninei-zaka, njlnjl. Iifoto: Umnyhadala weJidai Matsuri eKyoto Iifoto: Ientyatyambo zeCherry kwiifoto zaseKyoto: Ihotele yase-Kyoto Imperial (eKyoto Gosho) Iifoto: Kifune, Kurama, Ohara ebusika -Ukuhambahamba ujikeleze umntla weKyoto Kyoto! 26 Iindawo eziMnandi kakhulu: Fushimi Inari, Kiyomizudera, Kinkakuji njlnjl. Iifoto: Nara -Ikomkhulu lakudala laseJapan Iifoto zaseKyoto: I-Kyoto yesiNtu kwiifoto zasehlotyeni: Iidolophana ezigqunywe likhephu eJapan Iifoto: Koyasan
IHakodate kumazantsi eHokkaido igutyungelwe likhephu ukusuka ngoJanuwari ukuya kuMatshi.IHakodate ngeli xesha intle ngokwenene.Isitya serayisi saselwandle kwimarike ebizwa ngokuba yiAsaichi sesona silungileyo. Masithathe uhambo lwenyani ukuya eHakodate! Nceda ujonge inqaku elilandelayo ngeenkcukacha. Iifoto zeHakodate Night view ukusuka kwiNtaba iHakodate = Shutterstock Indawo yasebusika evela kwiNtaba yeHakodate = Shutterstock Mt. ubusika Kanemori Aka Renga Soko e Hakodate = Shutterstock Hokodate Morning Market kufuphi Hakodate Station Seafood isitya kwimarike yasekuseni Hakodate = Shutterstock Uhonjiswe kakuhle Goryokaku = Shutterstock Uhonjiswe kakuhle Goryokaku = Shutterstock Kukho iMount Komagatake entle kwihlomela leShutter Hakoda = Ungonwabela iShutter Hakoda ukutyibilika kunye ne-snowboarding e-Onuma Park kwidolophu yaseHakodate = Shutterstock Imephu yeHakodate [idilesi yemephu = "Hokodate" ububanzi = "100%" ubude = "500px" api="AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme = "spcreet" class="spcreet" class="spcreet" -imephu yeborder dp-map-centered" zoom="8" draggable="true" controls="inyani"] Ndiyabulela ngokufunda kwakho isiphelo. Buyela ku "Okugqwesileyo kweHakodate" Izithuba eziyeleleneyo: Hakodate! Iifoto ezi-7 eziBalaseleyo zabakhenkethi kunye nezinto ekufuneka zenziwe: iBiei kunye neFurano ehlotyeni Iifoto:Ibhulorho yaseTaushubetsu eHokkaido Iifoto: Tomamu eHokkaido Amafoto: Amahashe eHokkaido Amafoto: Amahlathi amahle eTokachi, Hokkaido Amafoto: Noboribetsu Onsen -Hokkaido's inkulu yokuphumla kwentwasahlobo eshushu Iifoto : Iifoto zaseYokohama: Iifoto zeKoyasan: Iilali ezigqunywe likhephu eJapan Iifoto: EZintle zaseOkinawa ...
Iifoto: Umda weTadami kwiLizwe laseFukushima
Ukuba ufuna ukonwabela iimbono ezintle zasemaphandleni zaseJapan ukusuka kuloliwe, ndincoma umgca weJR Tadami kwintshona yeFukushima Prefecture. Umgca weTadami ubaleka ukusuka eAizu-Wakamatsu, isixeko sakudala apho unokuziva inkcubeko yeSamurai yaseJapan, ngeentaba. Iifoto zeTadami Line JR Tadami Line kwiFukushima Prefecture = Shutterstock JR Tadami Line in Fukushima Prefecture = Shutterstock JR Tadami Line in Fukushima Prefecture = Shutterstock JR Tadami Line kwiFukushima Prefecture = Shutterstock JR Tadami Line in Fukushima Prefecture = Shutterstock JR Tadami Line kwiFukushima Prefecture = Umgca wePixta JR Tadami kwiSithili saseFukushima = Umgca weShutterstock JR Tadami kwiSithili saseFukushima = Umgca wePixta JR Tadami kwiSithili saseFukushima = Imephu yeShutterstock yeAizu-Wakamatsu [idilesi yemephu = "Aizu-Wakamatsu" wide="100%" height="300px " api="AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme="discreet" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="7" draggable="true" controls="true"] Ndiyabulela ngokufunda kude kube sekupheleni . Buyela kwi "Best of Fukushima"Izithuba ezihambelanayo: Iifoto: Ilali yase-Ouchijuku eFukushima Prefecture Iifoto: Hanamiyama Park eFukushima Prefecture Fukushima Prefecture! Iindawo ezinika umdla kakhulu kunye nezinto zokwenza Iifoto: I-Miharu Takizakura -Umthi ogqwesileyo we-cherry eJapan! Iifoto: Ise Jingu Shrine e-Mie Prefecture Iifoto: I-Kanazawa e-Ishikawa prefecture Iifoto: I-Motonosumi Shrine e-Yamaguchi Iifoto: I-Gunkanjima Island e-Nagasaki Prefecture Iifoto: I-Togakushi Shrine e-Nagano Prefecture Iifoto: I-Biwako Valley e-Shiga Prefecture Iifoto: Takachiho e-Miyagaki Prefecture Iifoto: Iilali ezigqunywe likhephu eJapan
Iifoto: I-Beppu (1) Ime kakuhle indawo eshushu yasentwasahlobo
IBeppu, ekwimpuma yeKyushu, yeyona ndawo inkulu yokuphumla eshushu yaseJapan. Xa undwendwela iBeppu, uya kuqala umangaliswe yimithombo eshushu ephuma apha naphaya. Xa ujonge imbonakalo yesixeko saseBeppu ukusuka endulini, njengoko ubona kweli phepha, umphunga unyuka yonke indawo. Abangomlilo nangayiphi na indlela. Ebusuku, le miphunga iyakhanyisa kwaye ibengezele kakuhle. Iifoto zeBeppu Imephu yaseBeppu [idilesi yemephu = "Beppu, Oita" wide="100%" height="300px" api="AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme="discreet" class="dp-light-border-map-map-dp centered" zoom="9" draggable="true" controls="true"] Ndiyabulela ngokufunda kude kube sekupheleni. Nceda ubone ezinye iifoto. Buyela kwi "Best of Beppu" Malunga nam Bon KUROSAWA Kudala ndisebenza njengomhleli ophezulu we-Nihon Keizai Shimbun (NIKKEI) kwaye ngoku ndisebenza njengombhali wewebhu ozimeleyo. E-NIKKEI, ndandingumhleli oyintloko weendaba kwinkcubeko yaseJapan. Mandazise izinto ezininzi ezimnandi nezinomdla malunga neJapan. Nceda ubhekisele kweli nqaku ngeenkcukacha ezithe kratya. Izithuba eziyeleleneyo: Iifoto: Beppu (4) Yonwabela imithombo eshushu kwiindlela ezahlukeneyo! Beppu! Yonwabela kweyona ndawo inkulu yokuchithela iholide eshushu yaseJapan! Iifoto: Beppu (3) Masityelele izihogo ezahlukeneyo (Jigoku） Iifoto: Beppu (2) Iinguqu ezintle zamaxesha onyaka amane! : Hakone -Ecetyisiweyo indawo yentwasahlobo eshushu kufuphi neTokyo Iifoto: Ubusika kwi-Niseko Ski Resort eHokkaido -Yonwabela umgubo wekhephu!
Imifanekiso: IMiharu Takizakura-Umthi omnandi kakhulu we-cherry eJapan!
Ukuba ubunokundibuza ukuba yeyiphi eyona ntyatyambo i-cherry enhle kakhulu eJapan, ndiza kuthi i-Miharu Takizakura kwi-Fukushima Prefecture.Umthi we-Miharu Takizakura uneminyaka engaphezu kwe-1000 ubudala. Lo mthi omhle wecherry kudala ukhuselwe kwaye uthandwa ngabantu basekuhlaleni. Masihambe kuhambo lwenyani ukuya kuxabisa iMiharu Takizakura! Iifoto zeMiharu Takizakura IMiharu Takizakura eFukushima Prefecture = Shutterstock IMiharu Takizakura kwiFukushima Prefecture = Shutterstock IMiharu Takizakura kwiFukushima Prefecture = Shutterstock IMiharu Takizakura kwiFukushima Prefecture = Shutterstock IMiharu Takizakura kwiFukushimastock Prefecture = Shutterstock I Miharu Takizakura in Fukushima Prefecture = Shutterstock I Miharu Takizakura in Fukushima Prefecture = Shutterstock I Miharu Takizakura in Fukushima Prefecture = Shutterstock I Miharu Takizakura in Fukushima Prefecture = Shutterstock Imephu yase Miharu Takizakura [idilesi yemaphu Takizakura = "Idilesi yemephu Takizakura = "idilesi yemephu " ububanzi = "100%" ubude = "500px" api = "AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" umxholo = "ingqiqo" iklasi = "imephu ye-dp-imephu-ephakathi" zoom = "8" idraggable = "yinyaniso" "yinyani"] Ndiyabulela ngokufunda kude kube sekupheleni. Buyela kwi "Best of Fukushima" Izithuba eziyeleleneyo: Iifoto: Ipaki yeHanamiyama kwiSithili saseFukushima Iifoto: Amagama angundoqo ali-11 ukonwabela ngokupheleleyo Iintyatyambo zeCherry yaseJapan Iifoto: Iilali ezigutyungelwe likhephu eJapan Iifoto: Intaba yaseYoshino -30,000 yemithi yecherry iyaqhakaza entwasahlobo! Iifoto: Iifoto zeKoyasan: Ise Jingu Shrine kwiNgingqi yaseMie Iifoto: Kanazawa kwisithili sase-Ishikawa Iifoto: San'in -Ilizwe elingaqondakaliyo apho iJapan yakudala isala khona! Iifoto: Biwako Valley eShiga Prefecture
Iifoto: Takachiho kwi-Miyagaki Prefecture
I-Takachiho ngumhlaba ongaqondakaliyo owaziwa njengekhaya leentsomi zaseJapan. Ibekwe kwindawo yeentaba yeMiyazaki Prefecture kwimpuma yeKyushu. Idolophu isawagcina amabala asentsomini kunye nemidaniso yaseKagura ehambelana nazo. Ikwadume ngolwandle oluhle lwamafu ekwindla. Kwaye eyona ndawo idumileyo yabakhenkethi kule dolophu yiTakachiho Gorge. Masithathe uhambo oluya eTakachiho ngeefoto ezininzi! Iifoto zikaTakachiho Takachiho kwiSithili saseMiyagaki = Shutterstock Takachiho kwiSithili saseMiyagaki = ADobeStock Takachiho kwiSithili saseMiyagaki Takachiho kwiSithili saseMiyagaki = Shutterstock Takachiho kwiSithili saseMiyagaki = Shutterstock Takachiho kwiMiyagaki Prefecture kwiMiyagaki Prefecture kwiMiyagaki Prefecture yaseTakaki Miyagaki Prefecture kwiMiyagaki Prefecture Imephu Takachiho [idilesi yemephu = "Takachiho, Miyazaki Prefecture" width="100%" height="300px" api="AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme="discreet" class="porder-map-dp-dplight -centered" zoom="9" draggable="true" controls="true"] Ndiyabulela ngokufunda kude kube sekupheleni. Buyela kwi "Okugqwesileyo kweMiyazaki" Izithuba eziyeleleneyo: Iifoto: Iifoto: Oze eGunma Prefecture Iifoto: Biwako Valley in Shiga Prefecture Photos: Kanazawa in Ishikawa prefecture Photos: Hanamiyama Park in Fukushima Prefecture Photos: Ise Jingu Shrine in Mie Prefecture Photos: Gunkanjima Island in Nagasaki Iifoto zesithili: iTogakushi Shrine eNagano Prefecture Iifoto: Motonosumi Shrine in Yamaguchi Prefecture Photos: Tadami Line in Fukushima Prefecture Photos: Shuri Castle in Okinawa Prefecture Photos: Matsue in Shimane Prefecture Photos: Hikone Castle in Shiga Prefecture
Umyalezo ovela kumhleli:
Enkosi ngokundwendwelaBest of Japan”! Igama lam ndinguBon Kurosawa kwaye injongo yam kukubonelela ngolwazi oluncedo lweendwendwe ezinethemba kunye nabo banomdla kwiJapan bafuna. La manqaku, imifanekiso kunye nevidiyo ziya kukunika incasa ekhethekileyo yeJapan. Ndiyathemba ukuba "Best of Japan”Uya kuziva usondele eJapan kwaye ube nombono ongcono wento onokuyilindela.
Yonwabele iJapan kule ndawo!
Le ndawo ijongwa kakuhle kwikhompyuter. Ezinye iividiyo zisenokungadlali kwi-smartphone yakho. Nangona kunjalo, kwi-smartphone yakho usengakwazi ukufikelela kumanqaku akunika ulwazi lwamva nje ngeJapan. Amakhonkco angaphandle kule webhusayithi anokusetyenziselwa izibonelelo zakho.
Zininzi iisayithi ezazisa iJapan. Nangona le ndawo sele iqalile ndiza kuqhubeka nokuhlaziya umxholo wayo rhoqo.
Xa ufuna ukufunda ngeJapan okanye ufuna into enomdla wokufunda "Best of Japan"Yeyona ndlela yakho!
Imenyu yale ndawo
Leliphi iphepha ongathanda ukuhlola iJapan?
Ubomi baseJapan kunye nenkcubeko! phila ngokuvisisanayo nendalo kunye nabantu
Ukusuka apha ndingathanda ukukwazisa ngobomi baseJapan kunye nenkcubeko. Ndicinga ukuba igama eliphambili ukuqonda ubomi nenkcubeko yaseJapan "yiHarmony". Ke ngoko, ndingathanda ukushwankathela ubomi baseJapan kunye nenkcubeko ngokwalo mbono "wokuvumelana" kule ndawo. "IHarmony" esekwe kubomi nakwinkcubeko yaseJapan Nguwuphi umfanekiso onawo malunga neJapan? Ukusuka kwabanye abantu, iJapan ibonakala lilizwe elinzima kakhulu ukuliqonda. IJapan inokuba "yiGalapagos" ngandlela thile. Kwilizwe elikwisiqithi kude nelizwekazi, ukuhlala okukhethekileyo kunye nenkcubeko kukhulisiwe. Emva kokufika eJapan, abantu abaninzi bayamangaliswa bubomi kunye nenkcubeko eye yaphuhliswa njengeGalapagos. Ngelixa izixeko ezikhulu ezifana neTokyo ne-Osaka zikhula, indyebo yamaxesha onyaka amane yamkela iindwendwe. Amasiko anje ngeetempile, i-sumo kunye ne-kabuki zisahleli, kodwa iinkcubeko ezintsha ezinjengeopopayi, iicosplay, iirobhothi, njl.njl. Zizalwa zilandelelana. Ilizwe apho zonke izinto eziphikisanayo zihambelana. YiJapan leyo. Ukuba ucofa umfanekiso ongezantsi, uya kuziswa kwihlabathi lemvumelwano eyimfihlakalo yaseJapan. Ndilungiselele amaphepha ahlukeneyo, ke nceda undwendwele amaphepha amaninzi kwaye wonwabe. Imvisiswano kunye neNdalo Ukuvisisana naBantu ngeNkcubeko yanamhlanje Iividiyo ezinconyelwayo ezazisa ngobomi nenkcubeko yaseJapan Ndiyakuxabisa ukuba ufunde kude kube sekupheleni. Buyela Ekhaya Malunga nam Bon KUROSAWA Kudala ndisebenza njengomhleli ophezulu kuNihon Keizai Shimbun (NIKKEI) kwaye ngoku ndisebenza njengombhali wewebhu ozimeleyo. E-NIKKEI, bendi ...
Ezona zinto zilungileyo zenziwa eJapan kunye nendlela yokubhuka
Zininzi izinto onokuzonwabela kuhambo lwakho oluya eJapan. Phakathi kwazo, luhlobo luni lwezinto oceba ukuzakhela isicwangciso sakho sokuhamba? Kweli phepha, ndibalile into onokuyonwabela eJapan. Nceda ucofe kumfanekiso wento onomdla kuyo kwaye ufumane ulwazi oluthe kratya. Ulwazi olusisiseko lokubhukisha amatikiti kunye nokhenketho olungaziwayo lwabaphambukeli abanxibe i-kimono, isinxibo sesiko laseJapan esihamba kwitempile yaseSensoji itempile eyaziwayo eTokyo, Japan = shutterstock Ngaphambi kokuchaza into onokuyonwabela eJapan, nceda uqaphele ulwazi olunye olusisiseko uhambo lwakho luyamangalisa. Imalunga nokubhukisha amatikiti ahlukeneyo kunye nohambo. Ndizisa le nqaku kwinqaku elilandelayo, ke nceda ungene xa unomdla. 20 Izinto ezintle onokuzonwabela kuhambo lwakho oluya eJapan Emva koko, ngezantsi, ndiza kudwelisa izinto ezingama-20 endikucebisa zona. Ukuba ucofa umfanekiso ngamnye, ungaya kwinqaku elihambelanayo. Ukutya kwaseJapan Ukutya kwiindawo eziThengayo zeKhephu I-Cherry Blossoms Iintyatyambo Amantombazana amabini amancinci aseJapan ahlala phantsi kwikhaphethi ebomvu ukuze abone kwaye onwabele iAntumn yamagqabi anemibala egadini yaseJapan kwitempile yase-Enkoji, eKyoto, eJapan. Nantsi iRinzai Zen Sect kwaye idume kakhulu ngexesha lekwindla = shutterstock Autumn Amagqabi egadi zaseJapan i-Onsen (Intwasahlobo eshushu) Izilwanyana kunye neentlanzi Ukunyuka kweCosplayer njengabalinganiswa kumnyhadala wecosplay waseJapan .Cosplayers bahlala benxibelelana ukwenza inkcubeko, kunye nokusetyenziswa ngokubanzi kwekota " cosplay ", Osaka, Japan = Iipaki zokuzonwabisa zovalo kunye neMinyhadala yeePaki yoMxholo ...
Indawo ezigqibeleleyo zabakhenkethi eJapan! ubusika, intwasahlobo, ihlobo, ukwindla
Kule ndawo, ndinamaphepha okwazisa ngokukodwa kwiindawo ezahlukeneyo zaseJapan. Ungaya kumaphepha ngokubukela imenyu kwaye ucofe izihloko onomdla kuzo. Nangona kunjalo, ndidwelise la maphepha angezantsi. Jonga oku kulandelayo kwaye ukuba kukho iphepha lomdla wakho, nceda ucofe kulo kwaye uye kwelo phepha. Ngenxa yokuba iJapan lilizwe elibanzi kakhulu emantla nasezantsi, iHokkaido emantla kunye neKyushu neOkinawa emazantsi ahluke kakhulu. Ndiyathemba ukuba uyakufumana iJapan yakho oyithandayo kwindawo yam. Iindlela ezili-10 eziPhambili: Ungathanda ukuya phi? Ukuba ufuna ukujonga ngokubanzi ukuba loluphi uhlobo lweendawo zokubona eziseJapan, nceda ufunde iphepha elilandelayo. Iindawo ezigqibeleleyo zokufikela xa usiya eJapan Ezona ndawo zidumileyo eJapan zezi zilandelayo. Jonga imifanekiso yezilayidi kwaye ucofe kuyo nayiphi na indawo onomdla kuyo. Oku kulandelayo ngamanqaku ahambelana nommandla. Iindawo ekucetyiswa ukuba zenziwe eHokkaido Sapporo Hakodate Furano / ummandla weBiei Tohoku (Northeasheast part of Honshu) Iindawo ekucetyiswa ukuba zenziwe eSendai (Miyagi Prefecture) Towada, Oirase (Aomori Prefecture) Aizuwakamatsu (Fukushima prefecture) Kanto Region (Around Tokyo fect Recommwa Kana (Indawo yaseKanagawa) Ingingqi yaseChubu (Central Honshu) Iindawo ekucetyiswa ukuba zihanjwe Mt.Fuji (Yamanashi, Shizuoka Prefecture) Shirakawago (Gifu Prefecture) Kanazawa (Ishikawa Prefecture) kwingingqi yeKansai (Around Kyoto nase Osaka) Iindawo ezicetyiswayo zaseKyoto (Isithili saseKyoto) Nara Indawo yase-Osaka (e-Osaka) kwiNgingqi yaseChugoku (eNtshona Honshu) Iindawo ekucetyiswa ukuba zenziwe eHiroshima (kwiSithili saseHiroshima) iMiyajima (Isithili saseHiroshima) Matsue (Shimane ...
Indlela Yokubhukisha Indawo yokuhlala eJapan!
Kukho abantu abanokuzonwabisa ngeendlela ezahlukeneyo ezingaqhelekanga. Ngokwenyani, ndiyakuthanda ukuthelekisa iindawo zokugcina iihotele. Xa ndibhukisha ihotele, ndiyikhangela ngeendawo ezininzi zokubhukisha kwaye ndiyibhukishe ngendawo endandiqiniseke ngayo ngayo. Kwam okukuzonwabisa okunje, Ndivakalelwa kukuba kukho abakhenkethi abasebenzisa indawo yokubhuka abangakwaziyo ukucebisa kakhulu. Ke ngoko, ndiza kwazisa ngeendawo zokugcina iihotele ezicetyiswayo wonke umntu ngokwenza indawo eyahlukileyo kwe "Best of Japan"Ukusukela ngoku ukuya kweli phepha. Ndiza kwazisa ngeendawo zokugcina iihotele endizicebisayo. Ngeenkcukacha malunga nendawo yokuhlala eJapan njengehotele, iRyokan, Minshuku nceda ubone inqaku elilandelayo. Cofa kumfanekiso ngamnye, indawo yokubhukisha iza kuba iboniswe kwiphepha elahlukileyo 2 Iindawo eziNgcono eziThelekiswayo zokuHlala indawo yokuhlala eJapan Zininzi iindawo onokubhukisha ihotele okanye iRyokan eJapan.Phantse akunakwenzeka ukuyibona yonke loo nto, ke, into yokuqala endingacebisayo ngayo. 'ziziza zothelekiso' apho unokuthelekisa khona iiplani zokuhlala zeendawo ezininzi zokugcina iihotele .. I-TripAdvisor TripAdvisor Ukuba ufuna ukufumana indawo yokuhlala kulungile kwidolophu enjengeTokyo okanye iKyoto, ndincoma ukuba uqale ujonge ku-TripAdvisor. Indawo ethelekisa kakhulu.Le ndawo inezinto ezimbini eziluncedo.Kokuqala, usebenzisa i-TripAdvisor, unokuqokelela ulwazi malunga neehotele ezikaliwe kakhulu kunye nezinye ezona dolophu uza kuzo. Okwesibini, unokufumana eyona ndawo iphantsi Isicwangciso sokufika ...
Ukuhamba eJapan! IJapan Rail Pass, Shinkansen, Iizikhululo zeenqwelo moya njl.
Xa usiya eJapan ungahamba ngokukuko ngokudibanisa i-shinkansen (uloliwe weBullet), inqwelo moya, ibhasi, iteksi, ukuqesha iimoto njl.njl. Ukuba wongeza ukukhwela eShinkansen kuhambo lwakho, iya kuba yimemori emnandi. Kwimeko apho, ukuthenga "i-Japan Rail Pass" kuya kuba sengqiqweni kakhulu. Kweli phepha, ndiza kwazisa ngokujonga ngokubanzi. Eli phepha lide kakhulu. Ukuba ucofa iqhosha "bonisa" kwinto nganye, kuya kuboniswa imixholo efihlakeleyo eneenkcukacha. nceda uthathe ithuba kwitheyibhile yemixholo. Ungabuyela phezulu ngokucinezela iqhosha lotolo olusezantsi ekunene kweli phepha. I-Japan Rail Pass iwebhusayithi esemthethweni ye "Japan Rail Pass". Cofa kuyo kwaye iya kuboniswa kwiphepha elahlukileyo Ukucofa umfanekiso kuya kubonisa le mephu kwiwebhusayithi esemthethweni yeJapan Rail Pass kwiphepha elahlukileyo Malunga ukuba uceba ukuhamba ngaphakathi kweJapan usebenzisa oololiwe be-JR abanjengoShinkansen, unokufuna ukuthenga "I-Japan Rail Pass" ngaphambi kokuhamba. I-Japan Rail Pass (ekwabizwa ngokuba yi-JR Pass) yindlela yokupasa kaloliwe ebiza kakhulu ebonelela nge-JR kubakhenkethi bamanye amazwe. Ungakhwela kakhulu kwi-JR's Shinkansen kunye nokubonisa rhoqo njl.Ixabiso leJapan Rail Pass, umzekelo, ngama-33,000 yen ngomntu ngamnye (iintsuku ezisi-7, uhlobo oluqhelekileyo lwemoto). EJapan, kuthatha malunga ne-28,000 yen kumntu omnye ukuya nokubuya phakathi kweTokyo ne-Osaka eShinkansen. Ukuba usebenzisa i-JR eninzi, iJapan Rail Pass iya kuba "sisihlobo" sakho esinamandla kakhulu. Apha ngezantsi kukho ...
Amanqaku acetyiswayo / Ukulungiselela
Makhe ndinazise amanye amanqaku kule ndawo.
Kukho abantu abanokuzonwabisa ngeendlela ezahlukeneyo ezingaqhelekanga. Ngokwenyani, ndiyakuthanda ukuthelekisa iindawo zokugcina iihotele. Xa ndibhukisha ihotele, ndiyikhangela ngeendawo ezininzi zokubhukisha kwaye ndiyibhukishe ngendawo endandiqiniseke ngayo ngayo. Okwenzekileyo kum, ndiziva ngathi kukho abakhenkethi ...
Ungabhuka njani kwaye uthenge amatikiti kunye nokhenketho eJapan! I-Sumo, i-baseball, ikhonsathi, imisebenzi ...
Ukuba awuthathi nxaxheba kukhenketho olusebenza neqela elikhulu kwaye uhamba ngokukhululekileyo nabahlobo okanye usapho eJapan, uzibhala njani kwaye uthenge njani amatikiti okhuphiswano lwezemidlalo kunye neekonsathi. Okanye, ulufaka njani ukhenketho olunje ngemisebenzi? Kukho indawo zokubhukisha ...
Xa usiya eJapan ungahamba ngokufanelekileyo ngokudibanisa i-shinkansen (I-Bullet train), inqwelomoya, ibhasi, iteksi, ukuqhuba iinqwelo-mafutha njl njl .Uma wongeza ukukhwela i-Shinkansen kwindlela yakho yokuhamba, iya kuba yinkumbulo emnandi. Kwimeko enjalo, ukuthenga "iJapan Rail Pass" kuya kuba sengqiqweni kakhulu. Kweli phepha, ndiza ...
Amanqaku acetyiswayo / iindawo ekuyiwa kuzo
Kule ndawo, ndinamaphepha endinawazisa ngokukodwa kwiindawo ezahlukeneyo zaseJapan. Ungaya kumaphepha ngokujonga imenyu kwaye ucofe izihloko onomdla kuzo. Nangona kunjalo, ndidwelise la maphepha apha ngezantsi. Jonga oku kulandelayo kwaye ukuba kukho iphepha ...
Izinto ezilungileyo zenziwe eTokyo: Asakusa, Ginza, Shinjuku, Shibuya, Disney njl.
I-Tokyo inkulu-dolophu yaseJapan. Ngelixa inkcubeko yemveli isasekhona, ubuchule beli xesha lihlala lisenzeka. Nceda undwendwele iTokyo kwaye uve amandla. Kweli phepha, ndiza kwazisa ngeendawo zabakhenkethi kunye nokubona iindawo ezibonakala kakhulu eTokyo. Eli phepha lide kakhulu. Ukuba ufunda eli phepha, ...
Kyoto! Ezona ndawo zintle: Indawo yeFushimi Inari, Kiyomizudera, Kinkakuji njl.
IKyoto sisixeko esihle esifumana ilifa lenkcubeko yamaJapan. Ukuba uya eKyoto, ungonwabela inkcubeko yemveli yaseJapan kumxholo wentliziyo yakho. Kweli phepha, ndiza kwazisa ngezinto zokhenketho ezinconyelwa ngokukodwa eKyoto. Eli phepha lide, kodwa ukuba ufunda eli phepha ...
Amanqaku acetyiswayo / Inomdla
Zininzi izinto onokuzonwabela kuhambo lwakho lokuya eJapan. Phakathi kwazo, zizinto ezinjani onqwenela ukuzakhela isicwangciso sokuhamba? Kweli phepha, ndikhangele into onokuyonwabela eJapan. Nceda ucofe umfanekiso wento onomdla kuyo kwaye ...
Ezona ndawo zili-12 zeyona ndawo intle yeqhwa eJapan: Shirakawago, Jigokudani, Niseko, Sapporo festival ...
Kweli phepha, ndingathanda ukwazisa ngemeko yekhephu elimangalisayo eJapan. Zininzi iindawo ezinekhephu eJapan, ngoko ke kunzima ukwenza isigqibo ngeyona ndawo intle yesithwathwa. Kweli phepha, ndishwankathele eyona ndawo zintle, ikakhulu kwiindawo ezithandwa ngabakhenkethi bangaphandle. Ndiza kwabelana ngayo ...
Eyona ndawo intle yeCherry Blossom kunye neXesha laseJapan! Inqaba yaseHirosaki, Mt.Yoshino ...
Kweli phepha, ndiza kwazisa iindawo zokubona indawo ezineentyatyambo ezintle zetsheri. Kuba abantu baseJapan batyala iintyatyambo zecherry apha naphaya, kunzima kakhulu ukugqiba eyona ndawo intle. Kweli phepha, ndiza kukwazisa kwiindawo apho abahambi abavela kumazwe angaphandle banokonwabela iimvakalelo zaseJapan ngeentyatyambo zecherry. ...
Ulwazi olusisiseko ezili-11 ukwazi ngaphambi kokuba uhambe eJapan
Izidalwa zaseJapan ezibonakala kulo mboniso wesilayidi ngokuqinisekileyo ziya kudlulisela ulwazi oluluncedo kuwe!
Leliphi elona xesha lilungileyo lokutyelela iJapan?
Leliphi elona xesha lilungileyo lokuya eJapan? Impendulo ixhomekeke kwinjongo yakho yokuhamba. Mhlawumbi ufuna ukubona iintyatyambo zaseJapan ezidumileyo? Ukuba kunjalo, ndincoma ukuza eJapan ngenyanga ka-Epreli. Mhlawumbi ufuna ukubona imihlaba emihle yekhephu? Zama ukutyelela iHokkaido, iTohoku okanye iNagano ukusuka ngoJanuwari ukuya kuFebruwari. Ukuba ufuna ukonwabela amagqabi ekwindla, ngeyeNkanga yeyona ilungileyo. Ukuba uza kubona amagqabi ekwindla eHokkaido, ngeyeDwarha yeyona ilungileyo. Eli nqaku liqaqambisa amaxesha onyaka ngeempawu ezintle. Ngentwasahlobo-Matshi, Epreli, Meyi: Ixesha leentyatyambo ezintle Mt. I-Fuji, Japan = I-Adobe Stock Nemophila eHitachi Seaside Park, eIbaraki, eJapan ngexesha laseNtlakohlaza eJapan kukwinyanga ka-Matshi, ngo-Epreli nango-Meyi. Iiveki ezi-3 zokugqibela zika-Matshi kunye neeveki zokuqala ezi-3 zika-Epreli ngamaxesha afanelekileyo okuhamba ngeNtwasahlobo. Abafundi bayawugqiba unyaka wesikolo kwaye abantu abadala abasebenzayo basesemsebenzini. Unyaka wesikolo waseJapan uqala ngo-Epreli kwaye ugqibe unyaka olandelayo ngo-Matshi. Iintyatyambo zeCherry zihlala ziqhakaza ngexesha leeveki ezimbini phakathi konyaka wesikolo. Kuxhomekeka kwindawo oya kuyo eJapan, uya kuhlala ukwazi ukufumana umnyhadala weentyatyambo zekherizim. Imozulu yasentwasahlobo igqwesile emini kodwa ubusuku busenokuhlala bubanda ehlotyeni- ngoJuni, Julayi, Agasti: IHokkaido kunye neminyhadala yehlobo ziyacetyiswa Intsimi yeentyatyambo enemibala kunye nesibhakabhaka esiluhlaza eShikisai-no-oka, eBiei, eHokkaido, .. .
Ulwimi! Izinto ezi-3 zokuzikhumbula xa uthetha nabantu baseJapan
Abantu abaninzi baseJapan abalunganga ukusebenzisa isiNgesi. Ngesi sizathu, abantu abeza eJapan abanakho ukunxibelelana kakuhle nabantu baseJapan. Abaphambukeli ngamanye amaxesha bayazibuza ukuba bangalucela njani nakubani na uncedo xa belahlekile okanye befuna ulwazi. Xa besiya kwidolophu encinci okanye ilali abanakunxibelelana ngokulula nabantu kwindawo yokutyela okanye nasehotele. EJapan, unokwenza ntoni ukunxibelelana nabantu baseJapan? Ndicebisa ezi zinto zintathu zilandelayo. Masithi "Sumimasen" Xa uqala ukuthetha nomntu waseJapan ongamaziyo, kufuneka uqale usebenzise eli binzana laseJapan. "Sumimasen" Oku kunentsingiselo efanayo no "Uxolo" okanye "Uxolo (ukukukhathaza) ngesiNgesi. NgesiJapan, eli binzana lisetyenziswa rhoqo. "ISumimasen" inokusetyenziswa njengo "enkosi" okanye isetyenziselwe ukubiza uncedo kwivenkile okanye kwindawo yokutyela. Eli binzana liluncedo kakhulu xa ufuna ukufumana ingqalelo yomntu. Ngokubanzi, abantu baseJapan abalunganga ukuthetha isiNgesi. Nangona kunjalo, ukuba uthi "uSumimasen" kumntu waseJapan baya kuma kwaye bamamele into oyithethayo. Abantu baseJapan banobubele kwaye bayamkela kubantu bamanye amazwe ke nceda uzive ukhululekile ukusebenzisa "iSumimasen" ukuba ufuna uncedo. Ungalibali ukubulela umntu ngokumamela nawe. Sukuba nexhala. Abantu baseJapan bayayiqonda indlela yokuthi "Enkosi" ngesiNgesi ukuze baqonde umbulelo wakho. Bhala iileta ephepheni AmaJapan anentloni, kodwa xa usengxakini, siza kukunceda. = Shutterstock ...
Imali yaseJapan indlela yokutshintsha imali kunye nendlela yokuhlawula
Imali yaseJapan yiYen. Eli phepha linamanani otshintshiselwano akutshanje ke nceda ujonge apha phambi kokutshintshiselana ngemali. Apha uya kufumana ulwazi ngamatyala kunye neengqekembe zaseJapan. Ukongeza, ndiza kuchaza imeko yangoku ngokubhekisele ekusetyenzisweni kwamakhadi etyala eJapan. Uluhlu lwexabiso lotshintshiselwano: I-currecy / i-USD yaseJapan, njlnjl ingakanani i-yen ye-1 yelizwe lakho? Umthombo: www.exchange-rates.org Amanqaku ebhanki aseJapan kunye neenkozo zemali Amanqaku ebhanki eJapan = I-Adobe Stock Kukho iintlobo ezine zamaphepha eJapan. Inqaku oya kuthi ulisebenzise kakhulu liphethe ixabiso le-1000 yen. 10,000 yen 5,000 yen yen 2,000 yen 1,000 yen Coins in Japan = Adobe Stock Kukho iintlobo ezine zemali eJapan. Lindela ukusebenzisa ii-yen ezili-100 kunye neengqekembe ezili-10 yen rhoqo. I-500 yen 100 yen 50 yen 10 yen 5 yen 1 yen XNUMX yen Iividiyo ezinconyelwayo ezinxulumene nemali yaseJapan Intlawulo eJapan I point Zisekhona iivenkile ezininzi ezamkela imali kuphela eJapan, zininzi iivenkile ezamkela kuphela imali. Uninzi lweehotele, iivenkile zesebe, iivenkile ezinkulu, iivenkile ezilula onokuzisebenzisa ungasebenzisa amakhadi etyala ukuba uhamba esixekweni. Nokuba ezinye iiteksi ziye zamkela amakhadi etyala kutshanje. Oomatshini abaninzi abathengisa amatikiti kaloliwe banokusebenzisa amakhadi etyala. Nangona kunjalo, ukuba uhlawula imali yokwamkelwa etempileni okanye kwi-shrine, kuya kufuneka ubenemali efumaneka ngokulula. Tshintshiselana ngemali yakho kwisikhululo senqwelomoya eJapan, zimbalwa kakhulu iivenkile ezamkela imali ngaphandle kwen yen. Ke ngoko, ...
Ukucetyiswa kweziza eziluncedo xa ulungiselela uhambo lwakho lokuya eJapan
Kweli phepha, ndiza kwazisa iiwebhusayithi ezahlukeneyo ezinxulumene neJapan. Ndiza kuhlaziya olu lwazi amaxesha ngamaxesha. Iya kuba sisixhobo esiluncedo kuwe ukuba usisebenzise ukuqokelela ulwazi. Iihotele, ezothutho, iivenkile zokutyela, kunye neewebhusayithi ezinxulumene nezasekhaya zishwankathelwe ngokweendidi. Kuba kukho amakhonkco emazantsi ephepha, nceda uye kwiphepha ofuna ukulibona ukusuka apho. Iindawo ezifundisa ngokubanzi malunga neJapan Japan Umbutho weSizwe wezoKhenketho eJapan uMbutho weSizwe wezoKhenketho (JNTO) yiwindows enxulumene nokhenketho kurhulumente waseJapan. Iwebhusayithi esemthethweni yeJNTO iqulethe ulwazi oluninzi lokujonga indawo eJapan. Olu lwazi lungeelwimi ezili-15. Ukuba kukho iintlekele ezinkulu eJapan, le webhusayithi isemthethweni iya kubonelela ngolwazi oluyimfuneko kubakhenkethi bamanye amazwe. >> Iwebhusayithi esemthethweni yeJNTO ilapha japan-guide.com japan-guide.com yiwebhusayithi edumileyo eqhutywa ngabaphambukeli abahlala eJapan. Uye walonyusa ngokuthe ngcembe inani layo lamanqaku okoko kwenziwa iwebhusayithi. Kunokuthiwa yindawo yolwazi yabakhenkethi eyaziwa kakhulu phakathi kwabakhenkethi abaza eJapan ngoku. Ngentwasahlobo, ibonelela ngolwazi malunga nokudubula kweentyatyambo ze-cherry eJapan. >> Iwebhusayithi esemthethweni ye-japan-guide.com ilapha i-ZEKKEI Japan i-Japan i-ZEKKEI i-Japan yindawo yolwazi yezokhenketho eqhutywa yinkampani eneofisi eyintloko e-Ginza, eTokyo. Inika amanqaku asebenzisa imifanekiso emihle yokwazisa ngobuhle baseJapan kubantu baphesheya. "UZEKKEI" uthetha "eyona ndawo intle kakhulu" ngesiJapan. Njengentsingiselo yegama layo, yi ...
Ikhadi le-SIM vs. I-Pocket Wi-Fi Rental eJapan! Kuthengwa phi kwaye kurentwa phi?
Ngexesha lokuhlala kwakho eJapan, unokufuna ukusebenzisa i-smartphone. Uyifumana njani? Zintandathu izinto onokukhetha kuzo. Okokuqala, ungasebenzisa inkonzo yokujikeleza kwisicwangciso sakho sangoku kodwa nceda ujonge kumboneleli wakho weenkonzo ngexabiso. Okwesibini, ungasebenzisa i-Wi-Fi yasimahla nge-smartphone yakho yangoku ngelixa uhamba eJapan. Emva koko ungabhalisela inkonzo ye-Wi-Fi ehlawulelwayo. Unokusebenzisa kwakhona ikhadi le-SIM elungiselelwe ngaphambi kwexesha elinokusebenza eJapan kunye ne-smartphone yakho engavulekanga. Ungasebenzisa inkonzo yokuqeshisa kwilizwe lakho okanye eJapan ukufumana ipowert ye-Wi-Fi, ikhadi leSIM, okanye i-smartphone efanelekileyo. Okokugqibela, unokukwazi ukuqesha ifowuni entle kwihotele yakho. Apha ngezantsi kukho ulwazi kulunye nolu khetho kukunceda uthathe isigqibo. Yeyiphi eyona ndlela efanelekileyo onokuyisebenzisa? Umatshini wokuthengisa umatshini wekhadi kwisikhululo seenqwelomoya i-Kansai e-Osaka Japan Ulwazi oluyimfuneko lokukhetha isixhobo koluhambo lwakho ngolu hlobo lulandelayo. Iinkonzo ezihamba ngexabiso ekuhambeni kweenkonzo Kutshanje, iinkonzo zokuhambahamba ezinokuthi zisetyenziswe ngexabiso eliphantsi kumazwe angaphandle ziye zenyuka. Ukuba kukho iinkonzo zokuhambahamba ngexabiso elifanelekileyo ngumboneleli wakho wangoku ke jonga ukuzisebenzisa. I-Pocket Wi-Fi Routers Ukuba uhamba nosapho okanye izihlobo zakho, kungcono ukusebenzisa i-router ye-Wi-Fi esepokothweni. Nge-Wi-Fi enye yeqela lakho iqela lakho lingasebenzisa i-Intanethi nangaphezulu kwe-smartphone enye ngexesha. Ukuba uneendlela ezimbini okanye ngaphezulu ze-Wi-Fi, kulula kuwe ukuba unxibelelane xa usiyahlule ...
Ixesha laseJapan ngoku! Umahluko wexesha kwilizwe lakho
Kukho ixesha elinye kuphela eJapan. I-Tokyo, i-Osaka, i-Kyoto, i-Hokkaido, i-Sendai, i-Nagano, i-Hiroshima, i-Fukuoka, i-Kumamoto ne-Okinawa zonke ngaxeshanye. Ngaphaya koko, kuba akukho xesha lokonga emini eJapan, akukho nzima kangako kuwe ukuba ulazi ixesha laseJapan. IJapan ngoku lixesha elingezantsi (Ukuba ixesha aliboniswanga, beka isikhombisi kwinxalenye yemephu yaseJapan). Nceda ujonge ixesha elingentla kwaye ujonge umahluko wexesha nendawo ohlala kuyo. Ukuba ilizwe lide empuma nasentshona, kukho imimandla yamaxesha eliqela kwilizwe elinye, kukho umahluko wexesha. Nangona kunjalo, i-Japan ayide kangako empuma nasentshona. E-Japan, umhlaba uhamba ubude emantla nasemazantsi, kodwa empuma nasentshona awukho mde kangako ukuba kunyanzelekile ukuba wandise ixesha lexesha ukuya kwezimbini okanye nangaphezulu. Umvundla okweli phepha uhlala kwisiqithi i-Ookuno kwisiXeko saseTakehara, kwisithili saseHiroshima. Bamalunga nama-20 kuphela abantu kwesi siqithi, kodwa kukho imivundla engama-700. Kwinoveli ethi "I-Adventures ka-Alice kwiWonderland", umvundla ubaleka ungxamile ngelixa ujonge umlindo wepokotho. Ukuba uya kwisiqithi sase-Oono, unokukwazi ukudibana nomvundla ongaqondakaliyo. Ndiyakuvuyela ukuba ufunde de kube sekupheleni. Buyela "kwizinto ezisisiseko" Malunga nam Bon KUROSAWA Kudala ndisebenza njengomhleli ophezulu kuNihon Keizai Shimbun (NIKKEI) kwaye ngoku ndisebenza njengombhali wewebhu ozimeleyo. Kwi-NIKKEI, ...
Iiholide eJapan! Umtsalane kubakhenkethi ugcwele kwiVeki yeGolide yeNtwasahlobo
Zili-16 iiholide ezisemthethweni eJapan. Ukuba iholide iwela ngeCawa, olona suku lusondeleyo evekini (ngesiqhelo ngoMvulo) emva koko iya kuba yiholide. Iiholide zaseJapan zigxile kakhulu evekini ukusukela ukuphela kuka-Epreli ukuya ekuqaleni kuka-Meyi. Le veki ibizwa ngokuba "yiVeki yeGolide". Ukongeza, zininzi iintsuku zokuphuma phakathi ku-Septemba ukuya ngasekupheleni kuka-Septemba ngeveki. Le veki ibizwa ngokuba yi "Silver Week". Iholide yesikolo iqala ekupheleni kukaJulayi kuye ekupheleni kuka-Agasti. Nceda uqaphele ukuba ngala maxesha iindawo zabakhenkethi kwilizwe liphela ziya kugcwele. Usuku loNyaka oMtsha: nge-1 kaJanuwari isango leTorii eMeiji Jingu Shrine, eHarajuku, eTokyo = IShutterstock Unyaka Omtsha yeyona holide ibaluleke kakhulu kubantu baseJapan. Abantu abaninzi baya kuthatha ikhefu ukusuka nge-29 kaDisemba kwaye bachithe ixesha nosapho ngoMhla woNyaka oMtsha. Abantu batyelela iitempile okanye iitempile bethandazela unyaka omtsha. Ukuza koSuku lwaBudala: NgoMvulo wesibini kaJanuwari abasetyhini abancinci baseJapan abanxibe ii-kimono zokuza kwiminyaka yobudala, ukubhiyozela unyaka abaya kugqiba amashumi amabini = Shutterstock Abafazi kwi-kimono ngaphandle kweziko lenkcubeko ngexesha lokuza kwemibhiyozo yoSuku lwaBudala kwiSixeko saseKagoshima, eJapan = Shutterstock Ngale mini, amaJapan abhiyozela abo baneminyaka engama-20 ubudala. Uninzi loomasipala lubhiyozela iwonga labo. Abantu abancinci banxiba iiKimono okanye iiSuti kwaye babhiyozela Ukuza kobudala. Usuku lweSiseko seSizwe: Nge-11 kaFebruwari Lusuku lokubhiyozela isiseko seJapan. Ngokwentsomi yakudala, uMlawuli uJinmu, umlawuli wokuqala, ...
Iziganeko zonyaka eJapan! UNyaka oMtsha, uHanami, i-Obon, iKrisimesi kunye nokunye!
Zininzi iziganeko zonyaka zemveli eJapan. Abantu abaninzi baseJapan bakhetha ukubhiyozela ezi ziganeko zonyaka kunye neentsapho zabo. Kutshanje, uninzi lwabakhenkethi bamanye amazwe bayonwabele imicimbi enjalo. Ngolunye lwezi ziganeko unokufumana umbono olungileyo ngenkcubeko yaseJapan. Eli nqaku linika iinkcukacha ngezi ziganeko zonyaka. Iziganeko zoNyaka oMtsha Iziganeko zoNyaka oMtsha zezona zinkulu eJapan. Ukusukela ekupheleni konyaka ezi ziganeko zilandelayo zenzeka rhoqo ngonyaka. UJoya no kane "nguJoya no kane" ngumsitho oqhutywa minyaka le kwiitempile zamaBuddha = Shutterstock "Joya no kane" ngumsitho wonyaka obanjelwa kwiitempile zamaBuddha. Ezinzulwini zobusuku nge-31 kaDisemba ababingeleli bakhalisa iintsimbi ezinkulu zetempile izihlandlo ezili-108. Kubonakala ngathi kukho amaxhala ali-108 ebantwini. Intsingiselo emva kokukhala kweentsimbi kukugxotha ezo mvakalelo. UToshi-Koshi soba "UToshi-Koshi soba" zii noodles ngesiqhelo zityiwa nge-31 kaDisemba. AmaJapan atya ii-noodle ezinde ngethemba lokuba baya kuphila ubomi obunethamsanqa. Isihlwele seHatsumode eHatsumode eAsakusa eTokyo, eJapan. IHatsumode yindawo yokuqala yamaShinto okanye yokutyelelwa kwetempile yamaBuddha yoNyaka oMtsha waseJapan = Shutterstock "Hatsumode" lutyelelo lokuqala lonyaka kwindawo engcwele okanye itempile. Kunyaka omtsha, yonke indawo engcwele kunye netempile kugcwele abantu abaninzi abenza olu tyelelo. I-Setsubun "Setsubun" ngumnyhadala wesiko laseJapan = Shutterstock "Setsubun" ngumsitho wesiko ukugxotha ububi. Izakubanjwa ekuqaleni kukaFebruwari. Abantu baphosa iimbotyi ekhaya ngelixa becula "Oni-wa-soto, fuku-wa-uti," ethetha "Out ...
Imozulu yeMo yezulu kunye neMo yoNyaka eJapan! I-Tokyo, Osaka, Kyoto, Hokkaido njl.
Xa ucwangcisa ukutyelela iJapan, iya kuba njani imozulu kunye nemozulu? Kule nqaku ndingathanda ukwazisa ngemozulu kunye nemozulu yaseJapan kunye neempawu zommandla ngamnye. Imozulu yaseJapan yahlukile eJapan sisiqithi esandisiweyo esandula iikhilomitha ezingama-3000 kumantla nasezantsi. Ineziziqithi ezikhulu ezine kunye neziqithi ezimalunga nama-4 6,800 ezincinane. Imozulu yahluke kakhulu phakathi kwe-Hokkaido esemantla kunye ne-Okinawa esemazantsi. Ubusika eHokkaido bubanda kakhulu, ngelixa i-Okinawa inobulali noko ebusika. Iindawo ezinekhephu elinzima ebusika licala laseJapan leHokkaido kunye necala loLwandle lwaseJapan emantla eHonshu. Idatha: I-Arhente yeMeteorological yaseJapan I-Arhente yeMeteorological yaseJapan I-Arhente yeMeteorological Imozulu yemozulu ebusika: Ikhephu kuLwandle lwaseJapan Ukuwa kweKhephu elinamandla eJapan = Shutterstock Njengomqolo weli chwebakazi, iintaba zinde. Ngenxa yolu luhlu lweentaba, imo yezulu yecala lePasifiki leziqithi zaseJapan kunye noLwandle lwaseJapan zahluke kakhulu. Njalo ebusika, kwicala loLwandle lwaseJapan, amafu amaninzi afumile kuLwandle lwaseJapan adibana neentaba. Apha, ikhephu liwa rhoqo. Okwangoku, kwicala lePasifiki, imozulu ecacileyo iza kuqhubeka ebusika. Ukuba uya kwiindawo ezisentshona yeentaba ebusika, ngakumbi iHokkaido kunye nenyakatho yeHonshu, uya kuba nakho ukubona indawo enekhephu. Ixesha lemvula laseJapan: Malunga noJuni Umfazi okwi-kimono yesiko laseJapan ehamba ecaleni kwendlela ehonjiswe nge-hydrangea entle eluhlaza (macrophylla) e ...
Iinyikima kunye neeVolcanos eJapan
E-Japan, iinyikima zenzeka rhoqo, ukusuka kwiinkwantya ezincinci ezingavakaliyo ngumzimba ukuya kwintlekele enkulu ebulalayo. Uninzi lwabantu baseJapan baziva benengxaki yokungazi ukuba ziya kwenzeka nini iintlekele zemvelo. Ewe kunjalo, ukubakho kokudibana nentlekele enkulu yendalo kuphantsi kakhulu. Uninzi lwabantu baseJapan bakwazi ukuhlala ngaphezulu kweminyaka yobudala engama-80. Nangona kunjalo, le meko yentlekele inempembelelo enkulu kumoya waseJapan. Abantu abanakukoyisa indalo. Uninzi lwabantu baseJapan luvakalelwa kukuba kubalulekile ukuphila ngokuhambelana nendalo. Kweli nqaku ndiza kuthetha ngeenyikima kunye nentaba-mlilo. Iinyikima zomhlaba eJapan Ukuba ubuhlala eJapan iminyaka embalwa, ubunokufumana ubuncinci benyikima enye ngokwakho. Izakhiwo zaseJapan zenzelwe ukuba zingadiliki nokuba kwenzeka inyikima enkulu. Ke ngoko, akukho mfuneko yokoyika. Nangona kunjalo, ukuba uhlala eJapan amashumi eminyaka, kukho ithuba lokufumana inyikima enkulu. Ngo-2011, xa inyikima enkulu yaseJapan yenzekile, ndisebenza kumatshini otyibilikayo eTokyo. I-East Japan inyikima enkulu I-East Japan inyikima enkulu yenyikima, nge-11 kaMatshi ngo-2011 I-Great East Japan Earthquake (iHigashi-Nihon Daishinsai) inyikima enkulu eyabetha emantla eHonshu nge-11 kaMatshi ngo-2011. usweleke ngenxa yetsunami eyenzeka emva kwenyikima. Emva kwenyikima enkulu yeHlabathi iHanshin eyenzeka ngo-90, ukwakhiwa kobungqina benyikima bebuthwelwe ...
Yintoni omawuyenze kwimeko yesaqhwithi okanye inyikima eJapan
NaseJapan, umonakalo ovela kuqhwithela nakwiimvula ezinkulu uyakhula ngenxa yokufudumala komhlaba. Ukongeza, iinyikima zihlala zenzeka eJapan. Unokwenza ntoni ukuba inkanyamba okanye inyikima yenzeka ngelixa uhamba eJapan? Ewe kunjalo, akunakwenzeka ukuba udibane necala elinje. Nangona kunjalo, kuluvo olulungileyo ukwazi ubalo olunokubakho kwimeko kaxakeka. Ke, kweli phepha, ndiza kuxoxa ngento emandiyenze xa kwehla intlekele yemvelo eJapan. Ukuba ubethwa yisaqhwithi okanye inyikima enkulu ngoku, khuphela usetyenziso lukaRhulumente waseJapan "Iingcebiso ngoKhuseleko". Ngale ndlela ufumana ulwazi lwamva nje. Ngapha koko, qiniseka ukuba unendawo ekhuselekileyo yokuhlala. Thetha nabantu baseJapan abakungqongileyo. Nangona kunjalo, ngokubanzi abantu baseJapan abalunganga xa bethetha isiNgesi, ukuba usengxakini basafuna ukunceda. Ukuba ungasebenzisa i-kanji (oonobumba besiTshayina), unokunxibelelana nabo ngale ndlela. Fumana ulwazi malunga nemozulu kunye nenyikima Ihlobo laseTshayina lesitshingitshane = isikhuseli sendawo Nika ingqalelo kwisimo sezulu! Ndixelelwe ngabahambi abasuka phesheya ukuba "abantu baseJapan bathanda imozulu." Ngokuqinisekileyo, sijonga ukuqikelela kwemozulu phantse yonke imihla. Kungenxa yokuba imozulu yeJapan itshintsha rhoqo mzuzu. IJapan ineenguqu zamaxesha onyaka kunye nezaqhwithi zixhaphakisa ukusuka ehlotyeni ukuya ekwindla. Ngapha koko, kutshanje, umonakalo ovela kwimvula enkulu uye wenyuka ngenxa yokufudumala komhlaba. Ukongeza, iinyikima zomhlaba kunye nentaba-mlilo zenzeka rhoqo eJapan. Ukuba uya eJapan, ndiza ...
I-Emperor yaseJapan kunye neFlegi yaseJapan
Xa usiya eJapan unokukwazi ukuziva wonwabile ngakumbi ukuba unolwazi olusisiseko ngembali yaseJapan. Eli phepha liza kubandakanya isishwankathelo samaKhosi abalulekileyo kwimbali yaseJapan. Ukongeza, ndiza kubandakanya ulwazi malunga neflegi yesizwe yaseJapans. UMlawuli waseJapan ejonga kwiNdlu yoBukhosi, eTokyo. IJapan = Shutterstock IJapan isebenzise i-Emperor System ukusukela kumaxesha amandulo. Umlawuli ubizwa ngokuba ngu "Tenno" ngesiJapan. Ngokwentsomi, umlawuli wokuqala yayingu-Emperor Jinmu. Kuthiwa ukuba uMlawuli uJinmu wathweswa isithsaba malunga ne-660 BC kodwa akuqinisekanga. Ukulandelelana kwetrone bekusenziwa lilifa ixesha elide. KuMgaqo-siseko omdala owamiselwa ngo-1889, i-Emperor yayizimele. Nangona kunjalo, kuMgaqo-siseko omtsha owamiselwa ngo-1946, abemi banikwa igunya lokulawula kwaye uMlawuli waba "ngumfuziselo". Namhlanje, usapho lwasebukhosini, olugxile kuMlawuli, lubandakanyekile kwimisebenzi yokomfuziselo. Lo msebenzi ubandakanya ukuya kwiminyhadala yasekhaya nakwamanye amazwe. Intsapho yasebukhosini iqhuba "Ippan Sanga" kabini ngonyaka ukubulisa uluntu kwi-Imperial Palace yaseTokyo. Oku kwenzeka ngoJanuwari 2 no-Disemba 23. Ngeli xesha, abantu abaninzi beza kwi-Imperial Palace ukuza kubona usapho buqu, Iividiyo ezinconyelweyo malunga noMlawuli waseJapan Iflegi yaseJapan Iflegi yaseJapan ibizwa ngokuba yi "Hinomaru ". Isangqa esikhulu esibomvu sitsaliwe kwimvelaphi emhlophe. Isangqa esibomvu simele ilanga eliphuma. AmaJapan anqula ilanga ...
Imifanekiso: Iintsuku zemvula eJapan-Amaxesha onyaka aJuni, kaSeptemba nangoMatshi
Imifanekiso: Itempile kaSensoji eseAsakusa, eTokyo
Imifanekiso: Umlingo weRurikoin Temple eKyoto
Ngo-Okthobha eJapan! Amagqabi e-Autumn aqala ukusuka kwindawo yentaba!
Imifanekiso: Inkcubeko yaseJapan bamboo -Arashiyama Bamboo Ihlathi, njl.
Imifanekiso: Itempile kaDaitokuji eKyoto -Ilizwe leZen ngokuhambelana nendalo
Imifanekiso: Itempile yaseKodaiji eKyoto
NgoJanuwari eJapan! Masonwabele ubusika baseJapan obuhle kakhulu!
Iifoto: Ipaka yeHanamiyama kwiFukushima
Zonke Cwangcisa uhambo Uhamba nini (16) Ikhalenda yomsitho (15) Imozulu kunye neMozulu (65) Olona hambo luhle lweendlela (30) Indawo yokuhlala (3) Amatikiti noKhenketho (2) Ukuhanjiswa (11) Impahla (6) ulwimi (1) Imali (1) Umahluko wexesha (1) Intanethi (1) Ukukhutshwa (3) Funda (83) Ubomi neNkcubeko (71) Imbali (4) Iindawo ezinxulumene noko (7)
Zonke iiNdawo IHokkaido (62) UHonshu: UTohoku (47) Isithili saseAomori (9) Isithili saseAkita (11) Indawo yePhondo (5) Isithili saseMiyagi (5) Isithili saseYamagata (5) Isithili saseFukushima (8) IHonshu: IKanto (81) ITokyo (31) IMetropolitan yaseTokyo (5) Isithili saseKanagawa (8) KwiPhondo laseChiba (4) Isithili saseSaitama (3) Isithili saseIbaraki (8) Isithili saseGunma (6) Isithili saseTochigi (7) UHonshu: uChubu (66) Isithili saseShizuoka (6) Isithili saseYamanashi (11) Isithili saseNagano (15) Isithili saseNigata (4) Isithili saseToyama (7) Isithili saseIshikawa (7) Isithili saseFukui (4) Isithili seGifu (13) Isithili saseAichi (3) KwiPhondo lam (5) IHonshu: iKansai (78) Isithili saseShiga (6) IKyoto (33) Isithili saseKyoto (2) Isithili saseNara (6) Indawo yaseWakayama (4) Osaka (7) Isithili sase-Osaka (4) Isithili saseHyogo (8) UHonshu: uChugoku (33) Isithili saseOkayama (6) Isithili saseHiroshima (11) Isithili saseYamaguchi (2) Isithili saseTottori (4) Isithili saseShimane (8) Shikoku (17) Isithili saseTokushima (5) Isithili saseKagawa (4) Isithili se-Ehime (3) Isithili saseKochi (1) UKyushu (37) Isithili saseFukuoka (5) Isithili saseSaga (1) Isithili saseNagasaki (7) Isithili saseKumamoto (8) Isithili saseOita (8) Isithili saseMiyazaki (3) Isithili saseKagoshima (3) Isithili saseOkinawa (13)
Zonke izinto onomdla kuzo Amatikiti noKhenketho (2) Ifashoni (8) Ukuthenga (14) Ukutya kwaseJapan (15) Iindawo ekuya kuzo ikhephu (77) Iintyatyambo zeCherry (34) Iintyatyambo (32) Izitiya zaseJapan (16) Amagqabi ekwindla (54) Onsen (22) Izilwanyana nentlanzi (10) Ukunyuka intaba (67) Ukukhwela indawo entle (29) Iipaki zokuzonwabisa (6) Ukujonga ebusuku kunye nokuKhanyisa (39) Iminyhadala (23) Iitempile kunye neShrines (51) Iinqaba (33) Iindawo zeMbali (59) Samurai kunye neNinja (14) Imisebenzi yezandla zemveli (5) IiMyuziyam (8) I-Manga kunye ne-Anime (7) Iilwandle (11) Ezemidlalo (14) Icandelo lezorhwebo (8) Ezothutho (12)
Zonke iinyanga Ubusika (52) UDisemba (18) NgoJanuwari (15) NgoFebruwari (18) Intwasahlobo (47) Ngomhla (13) Ngomhla (12) Epreli (17) Ihlobo (37) NgoJuni (12) Julayi (16) Nge-Agasti (15) Ukwindla (47) NgoSeptemba (16) Okthobha (16) NgoNovemba (17)
zonke Tags Abasiri (1) Aizu-Wakamatsu (2) I-Akihabara (4) IAomori (3) IArashiyama (4) I-Zoo (1) UAsakusa (3) Ipaki yeentyatyambo iAshikaga (3) UAso (5) IBeppu (6) IBiei (19) Itempile yaseChusonji (3) UDaisetsuzan (5) Iidotonbori (1) Imyuziyam yase-Edo-Tokyo (2) Itempile kaEikando Zenrinji (4) Enoshima (3) Indawo ephezulu yeFuji-Q (2) IFukuoka (3) UFurano (17) Indawo yeFushimi Inari-taisha (4) IsiGinza (3) IGinzan Onsen (4) IGiyon (1) I-Hakodate (16) Hakone (4) Imyuziyam yaseHakone evulekileyo (1) IHakuba (6) Indlu yeHasedera (1) Inqaba yaseHimeji (4) UMyuziyam weSikhumbuzo seHiroshima Peace (4) Ipaki yoLwandle lwaseHitachi (4) Ishumi Bosch (1) Ibhotwe lasebukhosini (2) Ise Indawo Engcwele (2) Ise Indawo yokuhlala (1) Izumo Taisha (5) Ipaki yeMonkey Snow yaseJigokudani (3) Kaiyukan (1) IKakunodate (5) Kamakura (6) Kamikochi (5) IKanazawa (5) Igadi yeKenrokuen (6) Itempile yaseKinkakuji (4) Itempile yaseKiyomizudera (7) IKobe (3) IKoyasan (4) Inqaba yaseKumoto (2) UKumano Kodo (4) IChibi iKawaguchiko (2) Inqaba yaseMatsumoto (4) I-Meiji-jingu Shrine (4) UMiyajima (10 GS amanqaku). Mt. UFuji (13) Mt. Takao (3) Mt. Yoshino (4) UNabana no Sato (3) INagasaki (3) IPaki yeNara (4) UNikko (1) UNikko Tosho-gu (4) UNiseko (7) Odaiba (2) Umsinga weOirase (3) IOkinawa (9) Inqaba yaseOsaka (3) IOtaru (14) Oze (4) Isiqithi saseSakurajima (2) ISapporo (22) ISendai (3) Itempile yeSensoji (3) Shibuya (2) IShinjuku (4) Igadi yeSizwe yeShinjuku Gyoen (2) Shirakawago (9) Shiretoko (14) Takachiho Gorge (3) Takayama (4) Indlela yaseTateyama Kurobe Alpine (6) Itempile yaseTodaiji (4) ITokyo Disney (1) IMyuziyam kaZwelonke yaseTokyo (2) I-Skytree yaseTokyo (3) ITokyo Tower (3) Ueno (1) Umeda (1) I-USJ (3) Yakushima (2) Yokohama (2) Yufuin (3) Zao (5)
Nceda ucofe "Ngenisa" emva kokukhetha
Hokkaido! Iindawo eziyi-21 zabakhenkethi abadumileyo kunye neenqwelo moya
IHokkaido sisiqithi sesibini ngobukhulu eJapan emva kweHonshu. Kwaye isemantla kwelona dolophu likhulu. IHokkaido ibanda kakhulu kunezinye iziqithi eJapan. Ngenxa yokuba ukuphuhliswa kweJapan kulibazisekile, kukho indalo enkulu kwaye intle eHokkaido. Kweli phepha, ndiza kwazisa ...
INtaba yeFuji: iindawo ezi-15 ezilungileyo zokubukela eJapan!
Kweli phepha, ndiza kukubonisa eyona nto ibonakalayo ukubona uMt. Fuji. Mt. IFuji yeyona ntaba iphakamileyo eJapan enobude obuziimitha ezingama-3776. Kukho amachibi enziwe ngumsebenzi wentaba-mlilo yaseMt. Fuji, kunye nokwenza imbonakalo entle yomhlaba ejikeleze oko. Ukuba ufuna ukubona ...
IJapan Onsen icetyiswa ngokukhethekileyo kubakhenkethi bangaphandle
Ngenxa yokuba iJapan lilizwe elinentaba-mlilo emininzi, amanzi asemhlabeni afudunyezwa ngumhlaba wentaba-mlilo, iOnsen (Imithombo eshushu) iphuma apha naphaya. Okwangoku, kuthiwa kukho iindawo ezingaphezu kwe-3000 ze-spa eJapan. Phakathi kwazo, kukho iindawo ezininzi ezithandwayo phakathi kwabakhenkethi bangaphandle. Kuvuliwe ...
Iitempile eziyi-12 kunye neMilambo eseJapan! I-Fushimi inari, Kiyomizudera, Todaiji, njl.
Zininzi iitempile kunye neetempile eJapan. Ukuba uya kwezo ndawo, ngokuqinisekileyo uya kuziva uzolile kwaye uhlaziye. Kukho iindawo ezintle kunye neetempile ongathanda ukuzithumela kwi-Instagram yakho. Kweli phepha, mandingenise ezinye zeendawo ezibonakala kakhulu zetempile kunye ...
Amaxesha eJapan! Inkcubeko ekhulisiweyo kutshintsho lwamaxesha amane
Kukho utshintsho olucacileyo lwamaxesha eJapan. Ihlobo lishushu kakhulu, kodwa ubushushu abuhlali ngonaphakade. Iqondo lobushushu lihla kancinci kwaye amagqabi emithini ajike abomvu aphuzi. Ekugqibeleni, ubusika obunzima buza kulandela. Abantu bayamelana nokubandayo kwaye balinde intwasahlobo efudumeleyo ukuba ifike. Oku ...
Ilungelo lokushicilela © Best of Japan , 2022 Onke amalungelo agciniwe.